KENYATA: "Al-Shabaab waxa ay doonaysaa dagaal diimeed ka dhaco dalkeena" - iftineducation.com
KENYATA: “Al-Shabaab waxa ay doonaysaa dagaal diimeed ka dhaco dalkeena”
aadan21 / December 4, 2014
iftineducation.com – Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ka hadlay weerarada soo badanaaya ee Shabaabku ka geysanayaan gudaha dalka Kenya, isagoo sheegay in uu magacaabay Wasiir cusub oo qibrad u leh la dagaalanka argagixisada
Madaxweyne Uhuru ayaa waxa uu sheegay in ujeedada Shabaabku ay tahay, sidii ay isaga horkeeni laheyd bulshada Muslimiinta iyo kuwa aan Muslimiinta ahayn ee u dhashay dalka Kenya, balse wuxuu ka digay in weerarada loo arko mid cid gaar ah lagu beegsanaayo.
“Weerarada ka dhacaaya dalkeena yaan loo arkin mid cid gaar ah duulaan lagu yahay, ujeedada laga lee yahay waa in leeska horkeeno Muslimiinta iyo dadka kale aan Muslimka ahayn.” ayuu yiri Madaxweynaha Kenya.
Madaxweynaha, ayaa wuxuu dadka reer Kenya uu ka codsaday inay u midoobaan la dagaalanka ka dhanka Ururka Al Shabaab, wuxuuna muujiyay inaan looga baahnayn inay ku kala qaybsamaan.
“Weeraradu waa kuwo argagaxiso oo u baahan in si wada jir ah loo wajaho, Muslimiinta waa inay doorkoodu ka qaataan la dagaalanka Al Shabaab.” ayuu yiri Uhuru Kenyatta, isagoo Saxaafada kula hadlaayay Madaxtooyada Nairobi.
Madaxweynaha Kenya, ayaa waxa uu Ururka Al Shabaab uu ku sheegay inay yihiin kuwo xoolo ah oo lumiyay maskaxdooda, isla-markaana ay ka been sheegeen Diinta Islaamka, oo uu ku sheegay diin nabadeed.
Dhanka kale Uhuru Kenyatta, ayaa wuxuu ku celiyay inaanay Dowladda Kenya ciidamadeeda kala soo bixi doonin dalka Somaliya, iyadoo sii hurin karta xaalada amni xumo ee Afrikada Bari, sida uu yiri.
Xisbiyada Mucaaradka Kenya, ayaa waxay dalbanayaan in Ciidamada Kenya laga soo saaro Somaliya, si looga gudbo weerarada Shabaabka ka wadaan dalkaasi.
Xaguu marayaa dhismaha garoonka Muqdisho? (SAWIRRO)
Wariye Rasta oo Oslo ku wareystay hooyo xabsi lagu xukumay, caruurna laga qaatay: VIDEO